Iphupha lokukhawuleza Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Ukhe wakrwitshwa ephupheni okanye omnye umntu wanyumbazwa? Ithetha ukuthini le meko iphupha kuwe? Cinga ngephupha lakho kwaye ufake zonke iinkcukacha ezibalulekileyo ekuchazeni iphupha.
1 Uphawu lwephupha «ukukhwaza» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «ukukhwaza» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «ukukhwaza» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ukukhwaza» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukutolikwa ngokubanzi kwamaphupha, ukukrwitsha kusetyenziswa njengophawu lokuphupha njenge Qaphela Wayalela umphuphi ukuba angathathi yonke into ebomini. Kulula ukuhlala nokuhlekisa okuncinci. Ngale ndlela, ukungaqondi kwi el mundo Ukuvuka kuya kucacisa kwaye kusombululeke ngokwakho. Ukuba iphupha liziva livakala ephupheni okanye empumlweni, ke kuya kufuneka uthimle, oku kubonisa kuwe, ngokokuchazwa ngokubanzi kwephupha, ukuba kungekudala uza kucelwa imali mboleko kwihlabathi elivukayo.
Ukukrokra ngomnye umntu ephupheni kufanekisela ulwaphulo-mthetho lomntu emhlabeni ovukayo. Kodwa kufuneka iqondwe njengesilumkiso sokuba ukuphupha kuya kuphulukana nabahlobo abaninzi ngenxa yobuthathaka kunye nobuyatha. Kuya kufuneka ucinge ngononophelo ngokuziphatha kwakhe kwixa elizayo ukuba ufuna ukukuphepha.
Ukuba iphupha lizikhathaza ephupheni, liyakukhubeka kwihlabathi elivukayo. Ngapha koko, uphawu lwephupha lukwaluphawu kule meko. ukungenisa y kugula.
Ukuba umntu ophuphayo uzibona ephupheni kuba kufuneka ehlekisile, oko kubonisa umnqweno wakhe ngokutolikwa ngokubanzi kwephupha. ulwalamano ukuthandana nomntu omthandayo. Ukuba ukuphupha kugxeka omnye umntu ephupheni ozamile ukumnyumbaza, oku kunokuqondwa njengophawu lokuba amaphupha enza ngokungekho ngqiqweni kwihlabathi eliphaphamayo kwaye lahlukile kuphela ekutshintsheni kwalo. uburharha siya kukhokela.
Uphawu lwephupha «ukukhwaza» - ukutolikwa kwengqondo
Kwinqanaba leengqondo, ukukrokra ephupheni kutolikwa ngendlela yokuphupha inayo yonke into kwihlabathi elivukayo. "Kancinci" ukuthatha. Oku kunokuthetha umntu kunye nemeko.
Ukuba umntu ontununtunu uphupha "ngokunyumbaza" isimboli yephupha, ukutolikwa ngokwengqondo kwephupha elo kufuna ukumkhomba i-nostalgia emva koburharha ngoku ufuna ukuvela. Kuya kufuneka ndijongane nalo mnqweno.
Ukuba iphupha lifuna ukukhathaza omnye umntu ephupheni, lifuna ngokwenkcazo yengqondo yephupha. kufutshane ukucenga okanye ukufuna ukuqhagamshelana naye.
Ukukhathaza omnye umntu kuthathwa njengokwengqondo. Ulwaphulo wadlala lo mntu kwihlabathi lokuvuka. Kodwa ukuba uphupha uzinyumbaza ephupheni, akufuneki udlale into oyikhubekisileyo.
Uphawu lwephupha «ukukhwaza» - ukutolika kokomoya
Ukutolikwa kwamaphupha okomoya kutolika umfuziselo wephupha "unyumbaza" ngengqondo yokuba iphupha alikho ngokomoya kunokuba, usondela kuye ngethamo elilungileyo loburharha.
Iphupha malunga neBus Stop